Dɛn na Yehowa Adansefo Yɛ De Boa Wɔn Nuanom a Wɔakɔ Ahokyere Mu?
Sɛ asiane bi si a, Yehowa Adansefo yɛ nhyehyɛe ntɛm kɔboa wɔn nuanom a wɔakɔ ahokyere mu no. Mmɔdenbɔ a ɛte saa no ma yehu ɔdɔ ankasa a yɛwɔ ma yɛn ho yɛn ho no. (Yohane 13:34, 35; 1 Yohane 3:17, 18) Akwan bɛn na yɛfa so boa?
Yeyi sika de boa. Bere a ɔkɔm kɛse bi sii Yudea no, tete Kristofo a wɔwɔ Antiokia no de sika kɔboaa wɔn nuanom Kristofo a wɔwɔ hɔ no. (Asomafo Nnwuma 11:27-30) Saa ara na sɛ yɛte sɛ yɛn nuanom a wɔwɔ wiase no fã baabi rehu amane a, yeyi ntoboa wɔ yɛn asafo mu de kɔboa wɔn a wɔakɔ ahokyere mu no ma wɔn nsa ka honam fam nneɛma a wohia.—2 Korintofo 8:13-15.
Yɛde mmoa a ɛho hia ma. Asafo mu mpanyimfo a wɔwɔ baabi a asiane asi no bɔ mmɔden sɛ wobehu baabi a asafo no muni biara wɔ, na wɔhwɛ sɛ biribiara nyɛɛ wɔn. Atoyerɛnkyɛm bere mu aboafo betumi ahwɛ ma wɔn nsa aka aduan, nsu pa, ntade, baabi a wɔbɛda ne nnuru. Adansefo pii a wɔwɔ nneɛma bi ho nimdeɛ tu wɔn ho ma bɔ ka kɔboa wɔn a wɔakɔ ahokyere mu no anaasɛ wosiesie afie ne Ahenni Asa ahorow a asɛe no. Biakoyɛ a yɛde yɛ adwuma wɔ yɛn ahyehyɛde no mu ne osuahu a yɛanya afi yɛn nuanom a yɛne wɔn bom yɛ adwuma mu no ma yetumi boaboa yɛn ho ano ntɛm kɔboa bere a asiane bi asi no. Ɛwom sɛ “wɔn a yɛne wɔn bɔ abusua wɔ gyidi mu no” na yɛboa wɔn de, nanso sɛ ebetumi ayɛ yiye a, yɛboa afoforo nso, a yɛnhwɛ ɔsom a wɔwɔ mu.—Galatifo 6:10.
Yɛde Kyerɛwnsɛm no kyekye afoforo werɛ na yɛboa wɔn ma wonya abotɔyam. Wɔn a asiane ato wɔn hia awerɛkyekye paa. Wɔ mmere a ɛte saa mu no, yenya nkuranhyɛ fi Yehowa a ɔyɛ “awerɛkyekye nyinaa Nyankopɔn” no hɔ. (2 Korintofo 1:3, 4) Yɛde anigye ka Bible mu bɔhyɛ ahorow ho asɛm kyerɛ wɔn a wɔn koma atu no, na yɛma wonya awerɛhyem sɛ ɛrenkyɛ Onyankopɔn Ahenni bɛma asiane a ɛma nnipa di yaw na wohu amane no nyinaa afi hɔ.—Adiyisɛm 21:4.
Sɛ asiane sisi a, dɛn nti na Adansefo no tumi yɛ ntɛm kɔboa?
Awerɛkyekyesɛm a ɛwɔ Bible mu bɛn na yebetumi aka akyerɛ wɔn a asiane ato wɔn?